12 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron wɔ Egypt asase so sɛ: 2 “Ɔsram yi bɛyɛ asram no nyinaa mfiase. Ɛbɛyɛ afe no mu ɔsram a edi kan ama mo.+ 3 Ka kyerɛ Israel asafo nyinaa sɛ, ‘Ɔsram yi da a ɛto so du no, abusua biara mpɛ oguan biako mma ne fie; kyerɛ sɛ ofie biara, oguan+ biako. 4 Na sɛ ofie no mufo sua sɛ wɔn nkutoo bɛwe oguan biako a, ɔne ne fipamfo nkyɛ wɔ ne fie, sɛnea akra a wɔwɔ hɔ dodow te. Mummu wɔn dodow ano nkyɛ oguan no mma ɛnso obiara so. 5 Momfa onini a wadi afe+ a ɔte apɔw,+ oguan anaa abirekyi. 6 Momfa aboa no nsie nkosi ɔsram yi da a ɛto so dunan,+ na Israel asafo mũ no nyinaa nkum no anwummere.+ 7 Na ofie biara a wɔbɛwe wom no, wɔmfa mogya no bi nyɛ apongua abien no ho ne ɔpon no atifi.+ 8 “‘Wɔnwe nam no anadwo no ara. Wɔmfa ogya ntoto na wɔmfa nka paanoo a mmɔkaw nnim+ ne ɛfan nwenenwene+ ho nni.+ 9 Monnwe no amono na mommfa nsu nnnoa, na mmom momfa ogya ntoto, ne ti ne ne nnyawa ne n’ayamde nyinaa. 10 Na munnnyaw bi mmma ade nnkye so, na sɛ ebi ka ma ade kye so a, momfa ogya nhyew.+ 11 Saa kwan yi so na munni: Momfa ade mmɔ mo asen+ na monhyɛ mpaboa+ na momfa poma nkura; na munni no ɔhare so. Ɛyɛ Yehowa twam.+ 12 Mɛba abetwam Egypt asase so anadwo+ yi akunkum Egypt mmakan nyinaa, fi onipa so kosi aboa so.+ Na mebu Egypt anyame nyinaa atɛn.+ Mene Yehowa.+ 13 Na ofie biara a mowɔ mu no, mogya no bɛyɛ mo sɛnkyerɛnne, na sɛ mihu mogya no a, metwam akɔ.+ Enti sɛ mede ɔsɛe ba Egypt asase so a, morenhu amane biara. 14 “‘Monkae saa da yi na munni no sɛ Yehowa afahyɛ, mo awo ntoatoaso nyinaa mu. Monhyɛ fã no na ɛnyɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa. 15 Munni paanoo a mmɔkaw nnim nnanson. Na da a edi kan no ara munyi mmɔkaw biara mfi mo afie mu, efisɛ obiara a obedi ade a mmɔkaw wom fi da a edi kan kosi da a ɛto so ason+ no, wobetwa ɔkra a ɔte saa afi Israel.+ 16 Da a edi kan no monyɛ nhyiam kronkron, na da a ɛto so ason no nso monyɛ nhyiam kronkron.+ Monnyɛ adwuma saa bere no;+ aduan a ɔkra biara bedi nkutoo na mubetumi ayɛ.+ 17 “‘Na monhyɛ paanoo a mmɔkaw nnim no ho fã,+ efisɛ saa da yi na meyi mo asafodɔm afi Egypt asase so. Monkae saa da yi, mo awo ntoatoaso nyinaa mu, na ɛnyɛ ahyɛde a ɛbɛtena hɔ daa. 18 Ɔsram a edi kan no da a ɛto so dunan anwummere kosi da a ɛto so aduonu biako anwummere no, munni paanoo a mmɔkaw nnim.+ 19 Na ɛnsɛ sɛ wohu mmɔkaw biara wɔ mo afie mu nnanson, efisɛ obiara a ɔde mmɔkaw bɛka n’ano no, ɔhɔho oo, Israelni oo,+ wobetwa ɔkra a ɔte saa afi Israel asafo mu.+ 20 Munnni mmɔkaw biara. Baabi a mote biara munni paanoo a mmɔkaw nnim.’” 21 Afei Mose frɛɛ Israel mpanyimfo nyinaa+ ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munyi nguan, sɛnea obiara abusua te, na munkum twam aboa+ no. 22 Na momfa sommɛ+ mmɔ mogya a ɛwɔ ɛsɛn mu no mu na momfa nsra apongua abien no ho ne n’atifi; na obiara mmfi ne fie mmpue kosi anɔpa. 23 Na sɛ Yehowa bɛfa ɔman no mu kunkum Egyptfo no na ohu mogya a ɛwɔ apongua abien no ho ne n’atifi a, Yehowa betwam afa ɔpon no ho na ɔremma ɔsɛe biara mma mo fie.+ 24 “Na momma eyi nyɛ ahyɛde+ a mo ne mo mma bedi so daa.+ 25 Afei sɛ mudu asase a Yehowa de bɛma mo no so sɛnea waka no a, monkɔ so nyɛ saa amanne yi mfa nsom no.+ 26 Na sɛ da bi mo mma bisa mo sɛ, ‘Amanne yi kyerɛ dɛn?’+ a, 27 monka sɛ, ‘Ɛyɛ twam afɔre a yɛbɔ ma Yehowa,+ efisɛ bere a ɔrekunkum Egyptfo no, otwaam faa Israelfo afie ho wɔ Egypt, na oyii yɛn afie fii mu.’” Afei nnipa no bɔɔ wɔn mu ase sɔree.+ 28 Na Israelfo no kɔyɛɛ nea Yehowa hyɛɛ Mose ne Aaron no nyinaa.+ Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ. 29 Na anadwo dasum no, Yehowa kum Egypt asase no so abakan biara,+ efi Farao a ɔte n’agua so no abakan so kosi dommum a ɔda afiase abakan so. Okum aboa biara abakan nso.+ 30 Afei Farao ne ne nhenkwaa ne Egyptfo a wɔaka nyinaa sɔree anadwo; na osu kɛse baa Egypt baabiara,+ efisɛ ofie biako mpo nni hɔ a obi anwu wom. 31 Enti saa anadwo no ara ɔfrɛɛ+ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsɔre na mo ne Israelfo a wɔaka nyinaa mfi me man mu na monkɔsom Yehowa, sɛnea moaka no.+ 32 Momfa mo nguan ne mo anantwi nyinaa nkɔ, sɛnea moaka no.+ Na ɛyɛ a, munhyira me nso.” 33 Afei Egyptfo no gyinaa wɔn so sɛ wɔnyɛ ntɛm+ mfi ɔman no mu, na wɔkae sɛ, “Anyɛ saa a, ɛnde yɛn nyinaa awuwu awie!”+ 34 Enti nkurɔfo no faa wɔn mmɔre a ennya nkawee, na wɔde ntama kyekyeree nea wɔfɔtɔw mmɔre wom no de sisii wɔn kɔn ho. 35 Na Israelfo no yɛɛ nea Mose kae no, na wobisaa nneɛma a wɔde dwetɛ ayɛ ne nea wɔde sika ayɛ ne ntama fii Egyptfo no hɔ.+ 36 Yehowa maa nkurɔfo no anim baa nyam wɔ Egyptfo anim,+ enti biribiara a wobisae no, wɔde maa wɔn,+ na wɔwerɛw Egyptfo ho.+ 37 Afei Israelfo no fii Ramese+ de wɔn ani kyerɛɛ Sukot.+ Ná wɔyɛ mmarima a wɔnam fam bɛyɛ mpem ahansia; wɔankan mmofra anka ho.+ 38 Na firamanfiramanfo+ bebree nso ne wɔn kɔe, na na nguan ne anantwi ne mmoa ahorow pii nso ka wɔn ho. 39 Afei wɔde esiam a wɔafɔtɔw a wɔde fi Egypt bae no tõõ paanoo a mmɔkaw nnim, efisɛ wɔpam wɔn fii Egypt, enti wɔannya bere ansiesie biribi a wobedi wɔ kwan so.+ 40 Mfe dodow a Israelfo de tenaa ase+—wɔn a wɔtenaa Egypt no+—si ahanan aduasa.+ 41 Na mfe ahanan aduasa soe pɛpɛɛpɛ no, da no ara na Yehowa asafodɔm no fii Egypt asase so kɔe.+ 42 Na ɛyɛ anadwo a wɔbɛkae ahyɛ Yehowa anuonyam sɛ wayi wɔn afi Egypt asase so. Na Israelfo no bɛkae saa anadwo yi de ahyɛ Yehowa anuonyam, wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 43 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: “Twam no ho ahyɛde ni:+ Ɔhɔho biara nnni bi.+ 44 Nanso sɛ akoa a wɔde sika atɔ no wɔ hɔ a, muntwa no twetia+ ansa na wadi bi. 45 Otubrafo ne ɔpaani nnni bi. 46 Munni wɔ ofie biako mu. Mommfa nam no bi mmfi fie hɔ nnkɔ abɔnten baabiara. Na mummmu ne dompe biara mu.+ 47 Israel asafo nyinaa nhyɛ saa fã yi.+ 48 Na sɛ ɔhɔho a wabɛtena mo mu pɛ sɛ odi twam no bi de hyɛ Yehowa anuonyam a, ma ɔbarima biara a ɔwɔ ne fie ntwa twetia+ ansa na wabɛn ho sɛ ɔrebedi bi. Ma ɔnyɛ sɛ okuromanni. Nanso obiara a ontwaa twetia nnni bi. 49 Mmara koro no ara na ɛwɔ hɔ ma okuromanni ne ɔhɔho a wabɛtena mo mu.”+ 50 Enti Israelfo nyinaa yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ Mose ne Aaron no. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ.+ 51 Na da no ara Yehowa yii Israelfo ne wɔn asafo+ fii Egypt asase so.